ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးဘရာကို ဆိုက်ဒ်မှန်မှန်ရွေးချယ်နည်းအဆင့် (၃) ဆင့် - For her Myanmar
မိန်းကလေးတွေ တိုင်အပတ်ဆုံးကိစ္စက ဘရာဆိုက်ဒ်ရွေးရတာပဲ။ ဘရာဆိုက်ဒ်မမှန်တဲ့အခါမျိုးတွေဆို ဇက်ကြောတွေတက်၊ တစ်ကိုယ်လုံး ချည်ထားတုပ်ထားသလို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီးဖြစ်ပြီး တစ်နေကုန်ကို နေလို့ထိုင်လို့ မကောင်းတော့တာ။ ဒီတော့ ဆိုက်ဒ်မှန်တဲ့ ဘရာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲဆိုတာ မေးစရာဖြစ်လာပြီလေ။ ဘရာကို ကိုယ်နဲ့ကွက်တိ မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ဒီအချက်လေးတွေပဲလိုပါတယ်။
(၁) Band size တိုင်းပါ
Band ဆိုတာက ရင်သားအောက်ကနေ အနောက်ချိတ်ချိတ်တဲ့ နေရာထိ ပါတဲ့နေရာလေးကို ပြောတာပါ။ Band size ကိုသိရဖို့ဆိုရင် ရင်သားအောက်ကနေ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပတ်လည်အတိုင်းအတာကို ပေကြိုးနဲ့တိုင်းပေးပါ။ အတိုင်းအတာက စုံဂဏန်းဖြစ်နေရင် နောက်ထပ်လေးပေါင်းထည့်ပါ။ မဂဏန်းဖြစ်နေရင် နောက်ထပ်ငါးပေါင်းထည့်ပါ။ ဥပမာ – ယောင်းရဲ့အတိုင်းအတာက ၃၂ လက်မဆိုရင် ယောင်းရဲ့ band size က ၃၂+၄=၃၆ လက်မ ဖြစ်ပြီး ယောင်းရဲ့အတိုင်းအတာက ၃၃ လက်မဆိုရင် band size က ၃၃+၅=၃၈ လက်မပေါ့။
Related article >>> ဖက်ရှင်ကျနေဖို့ အိတ်နဲ့ဖိနပ်က အရောင်တူနေမှကို ဖြစ်မှာလား?
(၂) Bust size တိုင်းပါ
Bust ဆိုတာကတော့ ယောင်းရင်သားရဲ့အတိုင်းအတာပါ။ Bust size တိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ရင်သားအလယ်တည့်တည့် ထိပ်လေးကနေ ပတ်လည်အတိုင်းအတာကို ပေကြိုးနဲ့တိုင်းပေးရပါမယ်။ ပတ်လည်အတိုင်းအတာရဲ့ အနီးစပ်ဆုံးနံပါတ်ကို ယူပါနော်။
Related article >>> ဒီနှစ်မိုးရာသီမှာ ခေတ်စားလာမယ့် နှုတ်ခမ်းနီအရောင် (၅) ရောင်
(၃) Cup size တိုင်းပါ
Cup ကတော့ ဘရာရဲ့အုံအထူအပါးပါ။ Cup size တိုင်းဖို့ မခက်ပါဘူး။ ယောင်းရဲ့ Bust size အတိုင်းအတာထဲကနေ Band size အတိုင်းအတာကို နှုတ်လိုက်ရုံပါပဲ။
ရလဒ်ကို အောက်ကဇယားထဲမှာ ကြည့်လိုက်ရင် Cup size ရပါပြီ။
လွယ်လွယ်လေးမှတ်လား ? ဒါဆိုရင်တော့ ယောင်းနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်နေမယ့် ဘရာကို ဆိုက်ဒ်အမှန်ဆုံး ရွေးချယ်နိုင်ပြီပေါ့နော်…
မိနျးကလေးတှေ တိုငျအပတျဆုံးကိစ်စက ဘရာဆိုကျဒျရှေးရတာပဲ။ ဘရာဆိုကျဒျမမှနျတဲ့အခါမြိုးတှဆေို ဇကျကွောတှတေကျ၊ တဈကိုယျလုံး ခညျြထားတုပျထားသလို တငျးတငျးကပျြကပျြကွီးဖွဈပွီး တဈနကေုနျကို နလေို့ထိုငျလို့ မကောငျးတော့တာ။ ဒီတော့ ဆိုကျဒျမှနျတဲ့ ဘရာကို ဘယျလိုရှေးခယျြကွမလဲဆိုတာ မေးစရာဖွဈလာပွီလေ။ ဘရာကို ကိုယျနဲ့ကှကျတိ မှနျမှနျကနျကနျရှေးခယျြနိုငျဖို့ ဒီအခကျြလေးတှပေဲလိုပါတယျ။
(၁) Band size တိုငျးပါ
Band ဆိုတာက ရငျသားအောကျကနေ အနောကျခြိတျခြိတျတဲ့ နရောထိ ပါတဲ့နရောလေးကို ပွောတာပါ။ Band size ကိုသိရဖို့ဆိုရငျ ရငျသားအောကျကနေ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ပတျလညျအတိုငျးအတာကို ပကွေိုးနဲ့တိုငျးပေးပါ။ အတိုငျးအတာက စုံဂဏနျးဖွဈနရေငျ နောကျထပျလေးပေါငျးထညျ့ပါ။ မဂဏနျးဖွဈနရေငျ နောကျထပျငါးပေါငျးထညျ့ပါ။ ဥပမာ – ယောငျးရဲ့အတိုငျးအတာက ၃၂ လကျမဆိုရငျ ယောငျးရဲ့ band size က ၃၂+၄=၃၆ လကျမ ဖွဈပွီး ယောငျးရဲ့အတိုငျးအတာက ၃၃ လကျမဆိုရငျ band size က ၃၃+၅=၃၈ လကျမပေါ့။
Related article >>> ဖကျရှငျကနြဖေို့ အိတျနဲ့ဖိနပျက အရောငျတူနမှေကို ဖွဈမှာလား?
(၂) Bust size တိုငျးပါ
Bust ဆိုတာကတော့ ယောငျးရငျသားရဲ့အတိုငျးအတာပါ။ Bust size တိုငျးမယျဆိုရငျတော့ ရငျသားအလယျတညျ့တညျ့ ထိပျလေးကနေ ပတျလညျအတိုငျးအတာကို ပကွေိုးနဲ့တိုငျးပေးရပါမယျ။ ပတျလညျအတိုငျးအတာရဲ့ အနီးစပျဆုံးနံပါတျကို ယူပါနျော။
Related article >>> ဒီနှဈမိုးရာသီမှာ ခတျေစားလာမယျ့ နှုတျခမျးနီအရောငျ (၅) ရောငျ
(၃) Cup size တိုငျးပါ
Cup ကတော့ ဘရာရဲ့အုံအထူအပါးပါ။ Cup size တိုငျးဖို့ မခကျပါဘူး။ ယောငျးရဲ့ Bust size အတိုငျးအတာထဲကနေ Band size အတိုငျးအတာကို နှုတျလိုကျရုံပါပဲ။
ရလဒျကို အောကျကဇယားထဲမှာ ကွညျ့လိုကျရငျ Cup size ရပါပွီ။
လှယျလှယျလေးမှတျလား ? ဒါဆိုရငျတော့ ယောငျးနဲ့အသငျ့တျောဆုံးဖွဈနမေယျ့ ဘရာကို ဆိုကျဒျအမှနျဆုံး ရှေးခယျြနိုငျပွီပေါ့နျော…
Tags: bra, bra size, Fashion, measurement